Agụmakwụkwọ na -eji Filmora dezie vidiyo - Geofumadas
Jenụwarị, 2021 Usoro ArtGEO, ọtụtụ
Nke a bụ usoro bara uru, dịka gị na enyi gị nọdụrụ wee gwa gị otu esi eji Filmora. Onye nkuzi na ozugbo na -egosi otu esi eji mmemme a, nhọrọ nhọrọ nke menus na -enye gị yana otu esi arụpụta ọrụ. Filmora bụ onye nchịkọta akụkọ vidiyo mara mma, dị mfe iji, kensinammuo na ike. Ọ na -enye atụmatụ dị elu, ọdịyo na usoro iheomume vidiyo, ọba akwụkwọ mmetụta, ọbá akwụkwọ mgbanwe, agba, ọdịyo na ngwaọrụ ederede.
Usoro ahụ dị ka usoro AulaGEO si amalite, na-akọwa ọrụ nke sọftụwia ahụ, ma jiri nwayọ na-akọwa ngwa ọrụ ọhụụ ma na-eme ihe omume bara uru. Na njedebe oru ngo etolitere site na itinye nkà dị iche iche nke usoro a.
Ihe nkiri onyonyo
Ihe ndị a chọrọ?
Usoro ahụ bụ site ncha
Sistemụ arụmọrụ Windows / MAC
Ụmụ akwụkwọ chepụtara
Ndị na-emepụta ọdịnaya
Ndị na-ese ihe osise
Ndị na -eme fim
AulaGEO na-enye nkuzi a n'asụsụ español. Anyị na -aga n'ihu na -enye gị ọzụzụ kachasị mma na nkuzi metụtara imewe na nka. Naanị pịa njikọ ahụ ka ị gaa web wee lelee ọdịnaya ihe ọmụmụ ahụ n'ụzọ zuru ezu.
Previous Post«Previous N'ezie Blender - Nhazi obodo na odida obodo
Next Post Agụmakwụkwọ PhotoshopNext »